ဆိုမာလီနိုင်ငံသို့ အမေရိကန် တပ်ဖွဲ့ဝင်များ ထပ်မံတပ်ဖြန့်ရန် ဘိုင်ဒန် ခွင့်ပြု - Xinhua News Agency
အမေရိကန်နိုင်ငံ ဝါရှင်တန်ဒီစီရှိ အိမ်ဖြူတော်ဧည့်သည်စင်တာအား ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် မတ် ၁၆ ရက်က တွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ)
ဝါရှင်တန်၊ မေ ၁၇ ရက် (ဆင်ဟွာ)
အမေရိကန်နိုင်ငံ သမ္မတ ဂျိုးဘိုင်ဒန်က အယ်လ်-ရှာဘတ် (al-Shabab) အစွန်းရောက်အုပ်စုကို တန်ပြန်တိုက်ခိုက်ရန် ဆိုမာလီနိုင်ငံ အရှေ့ပိုင်းသို့ အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့ဝင်များ ပြန်လည်တပ်ဖြန့်ရန် အစီအစဉ်တစ်ရပ်အား ခွင့်ပြုခဲ့ကြောင်း အိမ်ဖြူတော်က မေ ၁၆ ရက်တွင် ပြောကြားခဲ့သည်။
အာဖရိကတွင် တပ်ဖြန့်ထားသည့် တပ်ဖွဲ့ဝင်များမှ ရုပ်သိမ်းထားသော အမေရိကန် တပ်ဖွဲ့ဝင် ၅၀၀ ထက်မနည်းကို ယင်းနိုင်ငံ၌ “အမေရိကန် စစ်တပ် အနည်းအကျဉ်းတည်ရှိမှု” ဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက်ရန် ပြန်လည်နေရာချထားမည်ဖြစ်ကြောင်း အိမ်ဖြူတော်မှ ချမှတ်ထားသော မြေပြင်ဥပဒေများအရ အမည်မဖော်လိုသူ အဆင့်မြင့် အစိုးရအရာရှိတစ်ဦးက သတင်းထောက်များအား သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ၌ ပြောကြားခဲ့သည်။
အစိုးရ၏ ယခုလိုပြောင်းလဲမှုမှာ ဆိုမာလီနိုင်ငံမှ အမေရိကန် တပ်ဖွဲ့ဝင်အင်အား ၇၅၀ ခန့်ကို ရုပ်သိမ်းရန် သမ္မတဟောင်း ဒေါ်နယ်ထရမ့် အစိုးရ လက်ထက်က ချမှတ်ခဲ့သောအမိန့်ကို ပြောင်းလဲပြင်ဆင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
အမေရိကန် စစ်သားများသည် ဘိုင်ဒန်အစိုးရ စတင်တာဝန်ယူချိန်မှစ၍ စစ်မက်ဒဏ်ခံစားခဲ့ရသော ဆိုမာလီနိုင်ငံတွင် အခြေခံအားဖြင့် အလှည့်ကျ တာဝန်ထမ်းဆောင်လျက်ရှိကြောင်း၊ ယခုအခါ အစိုးရက ဒေသအတွင်း၌ အမေရိကန်နိုင်ငံသားများအား အကြမ်းဖက်ခြိမ်းခြောက်မှုများကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရန် မလုံလောက်တော့ကြောင်း ထည့်သွင်းစဉ်းစားလာခြင်းကြောင့်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
“အယ်လ်-ရှာဘတ်က ဆိုမာလီမှာ မတည်ငြိမ်မှုကို အမြတ်ထုတ်နေပြီး ရန်လိုတဲ့နိုင်ငံရေးဖြစ်လာပါတယ်။ ကျွန်တော်မှန်းရသလောက်ဆိုရင် အယ်လ်ကိုင်းဒါးရဲ့ အကြီးဆုံးနဲ့ ချမ်းသာကြွယ်ဝဆုံး ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ မိတ်ဖက်လည်း ဖြစ်ပါတယ်” ဟု အဆိုပါ တာဝန်ရှိသူက သတင်းထောက်များအား ပြောခဲ့သည်။ “ဒေသတွင်းမှာ အမေရိကန်နိုင်ငံသားတွေကို ပစ်မှတ်ထားဖို့ အယ်လ်-ရှာဘတ်ရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကို ကျွန်တော်တို့ စိတ်မကောင်းဖွယ်၊ ရှင်းရှင်းလင်းလင်း သက်သေတွေ ရှိထားပါတယ်” (Xinhua)
#US, #Somalia, #USTroops, #Redeployment, #Xinhua, #Myanmar, #XinhuaMyanmar, #အမေရိကန်, #ဆိုမာလီ, #အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့ဝင်များ, #ပြန်လည်တပ်ဖြန့်ထားမှု, #ဆင်ဟွာ, #မြန်မာ, #ဆင်ဟွာမြန်မာ
WASHINGTON, May 16 (Xinhua) — U.S. President Joe Biden has approvedaplan to redeploy U.S. troops to the eastern African country of Somalia to counter the extremist group al-Shabab, the White House said on Monday.
Drawn from forces already deployed in Africa, less than 500 U.S. troops will be repositioned to Somalia to constitute “a small, persistent U.S. military presence” in the country,asenior administration official said duringabriefing with reporters, speaking on the condition of anonymity under ground rules set by the White House.
“Al-Shabab has taken advantage of Somali instability and fractious politics to become, as I indicated, al-Qaeda’s largest and wealthiest global affiliate,” the official said on the call with reporters. “We have seen regrettably, clear evidence of al-Shabab’s intent and capability to target Americans in the region.”■
Photo : Photo taken on March 16, 2020 shows the White House Visitor Center in Washington D.C., the United States. (Xinhua/Liu Jie)